June 2014 - မောငျပေါကျ ( Maung Pauk )
Anonymous at 11:00:00 AM 4
Anonymous at 9:42:00 PM 0
Anonymous at 9:19:00 PM 0
Khant Phyo Win at 1:10:00 PM 1
Khant Phyo Win at 1:06:00 PM 0
Clone Factory Reset.bat ( ကလုန်းဖုန်း နှင့် သင်ပုန်းများအတွက် Factory Reset )
Ye Naing at 2:15:00 PM 0
Pattern / Password Lock ကျနေသော ကလုန်းဖုန်းများ နှင့် သင်ပုန်းများအတွက်
Factory Reset ချပေးတဲ့ Batch Script လေးပါခင်ဗျ ။
User Data အားလုံး ပျက်ပါမယ်။
ဒေါင်းလို့ရတဲ့ rar ဖိုင်ကိုဖြည်၊
JaloneBalone.bat လေးကို run ပေးပါ။ အဆင်ပြေပါစေ။
Note : Only for clone phones & tablets.
မှတ်ချက် ။ ။ ကလုန်းဖုန်းနှင့် သင်ပုန်းများသာ။
DOWNLOAD HERE \_ CLICK HERE
စက်သုံးဆီအရောင်းဆိုင်သုံး ကွန်ပျူ တာစနစ်နဲ့ စာရင်းအင်းတွေတွက်ချက်နိုင်တဲ့ - Mazimum Energy Pump Station For PC
Maung Pauk at 3:24:00 AM 0
ဒီ Software ကတော့ စက်သုံးဆီအရောင်းဆိုင်များအတွက် စာရင်းအင်တွေကို လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ အမြန်ဆုံးအထိရောက်ဆုံး ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ပါလိမ့်မယ်.. New Stars Myaungmya က ရေးသားထားပြီး User တွေအတွက် Free ပေးထားပါတယ်.. Developer ရဲ့ မူရင်းသားအတိုင်း ဖေါ်ပြပေးလိုက်ပါတယ်-
(ဖတ်ရတာ ပျင်းမှာစိုးလို့ ခပ်တိုတိုပဲပြောမယ်နော်)
Medium Pump Station အိမ်သုံး ပန့်ဆိုင်အသေးများနှင့်
Large Pump Station ပန့်ဆိုင်အကြီးများအတွက်
ဆီရောင်းချရမှု အ၀င်/ အထွက် ထိန်းချုပ်ရန် အတွက် ဖြစ်တယ် ... ။
Customer က 2000 ဖိုးဝယ်လဲ ဖြစ်တယ်
ဘယ်နှစ်လီတာနဲ့ ၀ယ်ပါမယ် ဆိုလဲ ဖြစ်တယ်
1 ဂါလံကို ဒသမ သုံးနေရာ 4.546 လီတာအထိ အတိအကျ လိုက်တွက်ပေးတယ်
Boxer ကားက ဆီလာဖြည့်တဲ့ အခါမှာ ကိုယ်ကလီတာနဲ့ပဲ တွက်ဝယ်ဝယ်
ဂါလံနဲ့ပဲ တွက်ဝယ်ဝယ် အဆင်ပြေအောင် လုပ်ပေးထားတယ်
တစ်နေ့စာ အရောင်းလီတာနဲ့ ငွေတန်ဖိုးသိရမယ်
တစ်နေ့စာ ဆီအ၀ယ်နဲ့ ငွေတန်ဖိုးလည်း သိရမယ်
မြန်မာလို ညွှန်ကြားချက်နဲ့ ဗီဒီယိုလည်း ပါပါတယ် .... ။
ဆိုင်နာမည် ပြောင်း၍ မရပါ ... ။ ၀ယ်ယူသုံးစွဲမည့်သူများအတွက်
အသေးစိတ် ညွှန်ကြားမှုနှင့် ဆွေးနွေးမှုများကို ကြိုဆိုပါသည် ... ။
Download : 9.06 MB
Processing Device များကို လေ့လာခြင်း
Khant Phyo Win at 1:20:00 PM 0
ကျွန်တော် Processing Device များကို ကွန်ပျူတာ ရှင်သန်ရေးအတွက် လုပ်ဆောင်ပေးသော Drive များလို့ရေးသားခဲ့ပါတယ် ။
Anonymous at 5:43:00 PM 0
Step2Update Fail error ဖြေ၇ှုင်၇န် Update.zip file များ Credit - Myo ko ko Zaw
t8951 insecureboot ကို update.appနဲ.ပါhttp://www.mediafire.com/download/qqzhkv6alcmlpcu/T8951-insecured-boot.rar
step2fail update collections
http://d-h.st/N3R G700 U00.zip
http://d-h.st/mvh G610 U00.zip
http://d-h.st/aTl C8813D UPDATE.rar
http://d-h.st/fIs y300 0000(step2fails).rar
credit myo ko ko zaw
Dell Inspiron (15) 3520 Drivers Download For Windo...
Restaurant Manager V-1.0 စားသောက်ဆိုင်သုံး ကွန်ပျူ...
Clone Factory Reset.bat ( ကလုန်းဖုန်း နှင့် သင်ပုန...
စက်သုံးဆီအရောင်းဆိုင်သုံး ကွန်ပျူ တာစနစ်နဲ့ စာရင်း...
HUAWEI Step2Update Fail error ဖြေ၇ှုင်၇န် Update....